Kungani amalebula lezinto? Amashothikhathi e-Windows
Ukuvula i-computer, thina asetshenziselwa ngesineke ulinda kulayishwa uhlelo lokusebenza. A uphawu lokuthi lesi senzakalo senzeka, Akukhona ukubukeka bekhompuyutha wakho esikrinini, kodwa hhayi wonke umsebenzisi computer uyazi ukuthi izakhi yakhiwa. Injongo eyinhloko kulesi sihloko - ukutshela abafundi ngalokho yezinto isetjenziswa ukwenza izinqamuleli. Kodwa sifika kulo kancane kancane, eziqala incazelo kwethemu izici zako ezisemqoka.
izinhlelo Amashothikhathi ezifana bekhompuyutha izinto
Ubuso bekhompyutha -, ngaphezu kwakho konke, a virtual PC emsebenzini umsebenzisi. Iqukethe kuphela amathuluzi main, okuyinto kufanele aqondiswe wonke umuntu. Ngakho, ukucabanga kwabo.
Ezansi isikrini kubha yomsebenzi njengoba strip ovundlile. Kuyinto isici nge eyinkimbinkimbi futhi lenani elikhulu sokusebenza. Injongo eyinhloko ibha umsebenzi kuyinto ukubonisa umsebenzisi lokusebenza luvele luyasebenza isicelo, kanye usuke esheshayo futhi evumelana phakathi amawindi. Ngaphezu kwalokho, inikeza ukufinyelela izinkomba sikhathi, usuke ulimi lwezandla futhi isithonjana Tinsita.
On isikhala ideskithophu main ngokuvamile imifanekiso ehlukahlukene nezinqamuleli. Lawa izakhi eziyisisekelo ukuba eziqhutshwa ngesikhathi ukusebenza umsebenzisi PC.
Icons - lokhu kuyindlela yokubonisa ezahlukene amafolda okuzenzakalelayo, amafayela, amadivayisi nezinhlelo zokusebenza. Futhi lokho isebenzisa amalebula lezinto? - You buza. Ubani kuyokwembula zonke izimfihlo!
Mark - yokufinyelela okusheshayo kunoma indawo, indlela emfushane. Ngokuvamile, leli fayela ine .ink isandiso ukuxhumana ngqo usizo kukhompyutha: iphrinta, kudiski yendawo, ifayela, ifolda, uhlelo ekhasi leWeb.
Abasebenzisi ngeke bakwazi uvikele ukwaziswa okubalulekile, ukudala izinqamuleli desktop yakho. Uhlelo ngoba ungakwazi ngephutha susa, futhi ngalendlela uzovikela ngokuphelele ngokwakho kusuka ukulahleka kwedatha.
Ufaka ku desktop ukunqamulela, wena isibopho esikhethekile, okuyinto, ngaphezu kwalokho, kwenza kube nokwenzeka ukunciphisa izidingo inkumbulo. Khomba intfo Kulula kakhulu - ke unikeza umcibisholo elincane ekhoneni ephansi kwesokunxele isithonjana. Ngokusebenzisa izinqamuleli wenze izinhlelo etholakalayo kanye namafayela zitholakala ezindaweni ezahlukene.
Njengoba ubona, baqonde indlela ukusebenzisa amalebula nguyiphi intfo amandla abasebenzisi ngisho abangenalwazi. Kulula kanjalo njengoba ukufunda edala zabo nezindawo.
Elementi enikeza ukufinyelela okusheshayo kumafayela, ivumela nge imisebenzi eyisisekelo ezine: dala, susa, esikhundleni futhi uthuthukise. Eyokuqala izinyathelo ezimbili ezisetshenziswa kakhulu abasebenzisi PC, ngakho-ke kuba kubo sizobe naka olwengeziwe.
Dala izinqamuleli kudeskithophu
Kunezindlela eziningana ukuba lula ukufinyelela emafayeleni okungena ahlukahlukene.
Isikhathi esining impela uma ufaka zabama-third party yi Onjiniyela wanezela ikhono ukwakha ngokuzenzakalelayo ishothikhathi kwideskithophu noma "Qala" imenyu. Kodwa kuthiwani uma ufuna ukwakha isixhumanisi sakho siqu uhlelo desktop ngenkuthalo esetshenziswa abasebenzisi? Lokhu manje adiliza, bahlola izindlela ezintathu eziyinhloko ukudala ishothikhathi.
Ukukhetha into oyifunayo, khetha "Ifayela" umyalo, "Dala isinqamuleli." Ngaphezu kwalokho, ilebula ungaqamba kabusha bese ukuhambisa igundane yakho kufolda yempande isikhala oyifunayo.
Uma ugudlula isithonjana ifayela kudeskithophu ngokuchofoza inkinobho yegundane kwesokudla ukuthi abuyisele kwimenyu yokuqukethwe bese ukhetha isenzo "Dala isinqamuleli."
Kukhona indlela olukhulu, ngokuyisisekelo okuyinto ukuthi umsebenzisi uthola lwemibhalo nazo zonke kumalebula wesistimu. Vele-ke kuyadingeka ukwenza amaqembu amathathu uthini: "Ifayela", "Yenza", "Isinqamuleli", bese ufaka ikheli le dokhumenti njengamanje.
Manje uyazi ukuthi kungani usebenzisa amalebula izinto futhi kanjani kahle imisiwe, futhi ngakho-ke, kubalulekile ukuya inqubo khipha. Kufanele kuqashelwe ukuthi lesi senzo akuhlukile ukuthengiselana nge imifanekiso, kungcono pretty eziwubala. Umsebenzisi kumele ukhethe into isithakazelo kuye, cindezela inkinobho yegundane kwesokudla ukuze uveze imenyu umongo bese ukhetha "Susa."
Kukangaki sizwa abashisekela amashothikhathi, kodwa bambalwa abantu bazi ukuthi badinga. amathuba abo kanye nezinzuzo ngenqubo yenhlangano nje asikwazi inselele.
Funda ukuthi amalebula kukhona izinto ezisetshenziswa, musa ukusheshe isivimbezelo kubo desktop yakho. Izenzo ezinjalo ngeke zifeza okuhle. Shiya kuphela amalebula labo izinhlelo ovame. Ngebanga lalokho, lokhu kuzokhuphula ukusebenza yekhompyutha yakho futhi sithuthukise umbono yobuhle izinto.
Ngu ukuklanywa izinqamuleli ideskithophu kungaba indlela yokudala kakhulu: ufake isitayela eyengeziwe ukuze uthole izithonjana noma nje indawo ezithakazelisayo kubo ngiphakamisa isithombe esihle ngemuva. Ngakho ungeke nje ukukhombisa ubunjalo babo yokudala, kodwa futhi ukuhlela idatha egcinwe kudeskithophu.
Indlela ukuthatha izithombe-skrini ku-Android
Kanjani ukusebenzisa ekuseni ngenjongo yokuphulukisa futhi kube neminye